Home News Dowladda Kenya oo albaabada ka soo xiratay kooxdii MW Farmaajo dalaalka ka...
Dowladda Kenya oo albaabada ka soo xiratay kooxdii MW Farmaajo dalaalka ka ahaa!
Sadaxdii bilood ee ugu danbeeysay waxaa ka dhacay dalka Kenya isbdal siyaasadeed oo saameyn weyn ku yeeshay qaar ka mida madaxda ka soo jeeda deeganada Soomaalida degto ee dalka Kenya. Madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku xigeenkiisa William Ruto ayaa iska fogeeyay Gudoomiyaha Aqlabiyadda Baarlaamanka Kenya Mudane Aadan Barre Ducaale. Adan Barre ayaa waxaa uu shaqsi si fudud ku soo galay siyaaasada islamarkaana lagu yaqaan fudeed iyo islawayni aan meel uu ku tiirsan yahay jirin. Waxaa lagu soo oogay dacwo ah in uu lunsaday lacag cashuur dalka taas oo gaaraysa $17 Milyan. Waxa loo sheegay hadii uu bixin waayo in xabsi lala tiigsan doono. Dhanka kale Waxaa isna hawada siyaasada Kenyan laga saaray gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Farax Macalin oo shaqo la’aan dawarsanaya hoteelada magaalada Neyroobi.
Hadaba MW Farmaajo oo lacag badan ku bixiyay sidii uu gacanta ugu hayn lahaa labadaaad dalaal ayaa meel cidla ah ku soo dhacay, iyada oo dowlada Kenya u aragto in uu qayb ka yahay kooxaha ka soo horjeedo danaha iyo hogaanka MW Uhurru Kenyatta.
Madaxweyne Uhurru Kenyatta ayaa iska fogeeyay MW Farmaajo kuna tilmaamay hogaamiye leh “aragtida caruurta oo kale”. Waxaa sidoo kale dowladda Kenya ay aad ugu carootay balamo badan uu MW Farmaajo uga baxay dowladda Kenya. Sida aad ka dareemeysid jawiga guud ee siyaasada Geeska Africa, waxaa muuqata in labada dal ay sii kala fogaanayaan. Dalka Kenya ayaa ahaa dalkii ugu danbeeyay ee ka mida dalalka dariska ah oo xirirka dowlada Soomaaliya hoos u dhigay.
Previous articleBeesha Hawiye oo Fariin Adag U Dirtay Madaxda Somaliland
Next articleCiidamada Dowladda oo Howlagalo Ka Sameeyay Qeybo Kamid Ah Degmada Yaaqshiid
Senator Jack Reed”Dowlada Farmaajo Ma Heysato Kalsonida Shacabkeeda oo Wey Ku...